Sidee Adsttxt iyo Ads.cert uga Hortagaan Khayaanada Xayeysiinta? | Martech Zone
Sidee Adstxt iyo Ads.cert uga Hortagaan Khayaanada Xayeysiinta?
Sabtida, Maarso 24, 2018 Sabtida, Maarso 24, 2018 Douglas Karr
In warshad $ 25 bilyan ah, $ 6 bilyan oo khiyaano ah aan la iska indhatiri karin… waa hanjabaad toos ah oo ku socota warshadaha. Istaatistikadaas waxay ka yimaadeen sahan ay sameeyeen Ururka Xayeysiiyaasha Qaranka, oo shuraako la ahaa shirkadda amniga dhijitaalka WhiteOps. Xulashada otomaatiga ah ee adeegsanaya barnaamijyada xayeysiinta barnaamijku ma caawin. Haddii aad barnaamij ka dhigan karto bartilmaameedka algorithms, waxaad sidoo kale barnaamijyo u sameyn kartaa si aad u soo jiidato xayeysiinta.
Amaahda warshadaha kale, sida iimaylka, IAB Labs ayaa soo saaray qeexitaanka Ads.txt. Ads.txt waxay rajeyneysaa inay joojiso khayaanada iyadoo la abuurayo tusmo iibiyaasha idman iyo daabacayaasha.
Waa maxay Ads.txt?
Ads.txt wuxuu u taagan yahay Iibiyeyaasha Dijital ah ee Idman waana hab fudud, dabacsan oo nabadgelyo leh oo daabacayaasha iyo qaybiyayaashu u isticmaali karaan inay si cad ugu caddeeyaan shirkadaha ay u idman yihiin inay iibiyaan tiradooda dijitaalka ah. Adoo abuuraya diiwaanka dadweynaha ee Iibiyaha Dijital ah ee La Oggol yahay, ads.txt wuxuu abuuri doonaa daahfurnaan ballaaran silsiladda wax soo saarka, waxayna siin doontaa daabacayaasha inay koontaroolaan alaabtooda suuqa, taasoo adkeyneysa jilayaasha xun inay ka faa'iideystaan ​​iibinta badeecadaha been abuurka ah ee nidaamka deegaanka. Maaddaama ay daabacayaashu korsanayaan ads.txt, iibsadayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay si fudud u aqoonsadaan Iibiyayaasha Dijital ah ee Idman ee daabacaadda ka qaybgalaysa, taas oo u oggolaanaysa calaamadaha inay kalsooni ku qabaan inay iibsanayaan tirakoob daabacaade oo sax ah.
Runtii waad arki kartaa tayda ads.txt faylka, halka aan ku leeyahay labada LiveIntent (mareegtada adreeskeena) iyo Google Adsense (shabakadeena muujinta muuqaalka).
Waa maxay Ads.cert?
Ads.txt waa hab fiican oo ah ogolaansho meelaynta xayeysiinta ee bartaada. Si kastaba ha noqotee, ma xaqiijinayso isha xayeysiinta. Ads.cert hadda waxay ku jirtaa horumar si ay taas u sameyso. Si la mid ah habka teknolojiyadda xannibaadda u shaqeyso, Ads.cert labaduba waxay hubin doonaan inaad adigu u oggolaatay meeleynta xayeysiinta, iyo sidoo kale inaad xaqiijiso Baahiyaha Dhinaca Baahiyaha (ama DSP).
Ads.cert, oo ay weheliso Ads.txt ayaa hubin doona:
Wadaage waa la oggol yahay iibin.
Tirinta xayeysiiska ayaa ah dhab ah.
Tiradda xayeysiiska ayaa ahayd aan wax laga beddelin.
Qaar baa jira su'aal sida nidaam ama nidaam ahaan nidaamkan adagi wuxuu ka baaraandegi karaa codsiyo iyo macluumaad aad u tiro badan waqtiga-dhabta ah ee loo baahdo. Waa la arki doonaa.
Waa kuwan muuqaalka guud ee qeexitaannada Smart AdServer, La Dagaalanka Musuqmaasuq ee Heerarka: Ads.txt iyo Ads.cert oo La Sharaxay.
Tags: sugida xayeysiiskaoggolaanshaha xayeysiiskakhayaanada adtiro xayeysiis ahxayeysiiskaads.txtIABjames hercherxayeysiis smart
REMME: Blockchain Miyuu Naga Saari Doonaa Soo Galista iyo Furaha Sirta ah?
Lumen5: Kusoo Rog Mawduucyada Fiidiyowyada Bulshada Isticmaalka AI